အဓိက ဆုဖလားအားလုံးနီးပါး ရယူခဲ့ကြတဲ့ နာမည်ကျော်ကစားသမားများ
28 Nov 2018 . 8:01 PM
ဘောလုံးသမားတစ်ဦးအတွက် ဆုဖလားအောင်မြင်မှုဆိုတာက အဲဒီကစားသမားတစ်ဦးရဲ့ သမိုင်းမှတ်တိုင်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဘောလုံးသမိုင်းတစ်လျှောက်ကို ပြန်ကြည့်ရင် အဓိက ဆုဖလားတွေ တော်တော်များများ ရယူခဲ့ကြတဲ့ ကစားသမားတွေ အများကြီးပါပဲ။ ဒါပေမဲ့ Nothing is Perfect ဆိုတဲ့ စကားအတိုင်း ကွက်လပ်လေးတွေတော့ ရှိကြပါတယ်။ ဥပမာ လက်ရှိကမ္ဘာ့အကောင်းဆုံး ဘောလုံးသမားစာရင်းဝင် စီရော်နယ်လ်ဒို Cristiano Ronaldo ၊ မက်ဆီ Messi တို့ဆိုရင် ကလပ်အသင်းနဲ့အတူ သူတို့မရဖူးတဲ့ အဓိက ဆုဖလားဆိုတာ မရှိသလောက်ပါပဲ။ ဒါပေမဲ့ နှစ်ယောက်စလုံးက ကမ္ဘာ့ဖလားကိုတော့ မကိုင်မြှောက်နိုင်သေးပါဘူး။ အခုဖော်ပြမှာက အဓိက ဆုဖလားအားလုံးနီးပါး ရခဲ့ဖူးတဲ့ နာမည်ကျော်ကစားသမားတွေ အကြောင်းဖြစ်ပြီး တချို့ကစားသမားတွေဆိုရင် ကမ္ဘာ့ဖလား၊ ချန်ပီယံလိဂ်စတဲ့ အောင်မြင်မှုတွေ ရယူခဲ့ပေမယ့် မရဖူးသေးတဲ့ ဆုဖလားတွေ ရှိနေဆဲပါ။ သူတို့တွေက ဘယ်သူတွေလဲဆိုတာ ကြည့်လိုက်ရအောင် . .
ဘောလုံးလောကမှာ ကျော်ကြားသင့်သလောက် မကျော်ကြားတဲ့ Underrated Players တွေထဲမှာ မာတာ Juan Mata ဟာ တစ်ဦးပါအ၀င်ပါ။ ထိပ်တန်းအဆင့်ရှိ ကွင်းလယ်တိုက်စစ်ကစားသမား ဖြစ်သလို၊ သူရခဲ့တဲ့ ဆုဖလားမှတ်တမ်းတွေအရ မာတာရဲ့ အနေအထားက တစ်ဦးချင်းအကောင်းဆုံး ဆုတံဆိပ်တစ်ခုခု ရသင့်နေသူဖြစ်ပါတယ်။ ကမ္ဘာ့ဖလား၊ ချန်ပီယံလိဂ်၊ ယူရိုပါလိဂ်၊ FA ဖလား၊ ယူရို၊ လိဂ်ဖလား အစရှိတဲ့ ဆုဖလားတွေ အများကြီး ဆွတ်ခူးခဲ့ပြီး သူ မရဖူးသေးတာဆိုလို့ ဥရောပစူပါဖလားနဲ့ အမှတ်ပေးဖလားသာ ကျန်ပါတော့တယ်။ ဒါ့အပြင် မာတာဟာ အဓိက ဆုဖလားအားလုံးနီးပါးရခဲ့ဖူးတဲ့ ရှားရှားပါးပါး စပိန်ကစားသမားတွေထဲမှာ တစ်ဦးအပါအ၀င်ဖြစ်ပါတယ်။
မော်ဒန်ဘောလုံးလောကမှာ ဆွီဒင်ဝါရင့်တိုက်စစ်မှူးကြီး အီဘရာဟီမိုဗစ် Zlatan Ibrahimovic ဆိုတာက ထိပ်တန်းစာရင်းဝင် တိုက်စစ်မှူးတစ်ဦးဆိုတာ ဘယ်သူမှ မငြင်းနိုင်ပါဘူး။ သိပ်မကြာသေးခင်ကမှ ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ကစားသမားဘ၀ သွင်းဂိုး(၅၀၀)ပြည့်ခဲ့ပြီး အသက်နဲ့မလိုက်တဲ့ ခြေစွမ်းမျိုး ပြသနေသူလည်းဖြစ်ပါတယ်။ မတူညီနိုင်တဲ့ နိုင်ငံ(၅)ခုမှာ အဓိက ဆုဖလားပေါင်း(၃၃)ခု ရယူနိုင်ခဲ့တဲ့မှတ်တမ်းကောင်းကို ပိုင်ဆိုင်ထားပေမယ့် အီဘရာဟီမိုဗစ်အတွက် ကွက်လပ်ဖြစ်နေတာက ချန်ပီယံလိဂ်ဖလားနဲ့ ရီးမီးယားလိဂ်ဖလားပါ။ လာလီဂါ၊ စီးရီးအေ၊ ပြင်သစ်လီဂူး၊ ယူရိုပါလိဂ်အစရှိတဲ့ ဆုဖလားတွေ ရယူခဲ့သူ အီဘရာဟီမိုဗစ်အတွက် ဒီကွက်လပ်(၂)ခုကို ဖြည့်နိုင်ဖို့က မလွယ်လောက်တော့ပါဘူး။
ဘာစီလိုနာ၊ PSG နာမည်ကျော် နောက်ခံကစားသမားဟောင်း မက်ဇ်ဝဲလ် Maxwell ကတော့ ဘောလုံးလောကမှာ မရှိတော့ပေမယ့် သူရရှိခဲ့တဲ့ ဆုဖလားမှတ်တမ်းတွေက မယုံနိုင်လောက်အောင်ပါပဲ။ ကစားသမားဘ၀တစ်လျှောက် ဥရောပမြေမှာ ဆုဖလားပေါင်း (၃၆)ခုအထိ ဆွတ်ခူးခဲ့ပြီး သူကစားခဲ့တဲ့ကလပ်အသင်းတိုင်းနဲ့ အဓိက ဆုဖလားတွေ ရယူနိုင်ခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။ ဘောလုံးလောကမှာ ကျင်လည်ခဲ့စဉ်က မက်ဇ်ဝဲလ်ဟာ ဆုတံဆိပ်အများဆုံးရရှိခဲ့သူ (ကလပ်အသင်းနဲ့ ဖလား ၃၃ခု၊ တစ်ဦးချင်းဆု ၅ခု)အဖြစ် မှတ်တမ်းစိုက်ထူခဲ့သူလည်းဖြစ်ပါတယ်။
Dani Alves – Paris Saint Germain
မက်ဇ်ဝဲလ်ကို ကျော်ဖြတ်ပြီး လက်ရှိဘောလုံးလောကမှာ အဓိကဖလားနဲ့ ဆုတံဆိပ် အများဆုံးရရှိခဲ့သူအဖြစ် ရပ်တည်နေသူက ဒန်နီအဲလ်ဗတ်စ် Dani Alves ဖြစ်ပါတယ်။ ကစားသမားဘ၀တစ်လျှောက် ဆုဖလားပေါင်း (၄၃)ခုအထိ ရယူခဲ့ပြီး သူကလည်း မက်ဇ်ဝဲလ်လိုပဲ ကစားတဲ့အသင်းတိုင်းနဲ့ ဆုဖလား ရယူနိုင်ခဲ့သူပါ။ ကမ္ဘာ့ဖလားကိုသာ ဆွတ်ခူးခဲ့ရင်တော့ ဒန်နီအဲလ်ဗတ်စ်ရဲ့ ကစားသမားဘ၀က ပြည့်စုံသွားပြီလို့ ဆိုရမယ် . .
အဓိက ဆုဖလားအားလုံးနီးပါး ရယူခဲ့ကွတဲ့ နာမညျကြျောကစားသမားမြား
ဘောလုံးသမားတဈဦးအတှကျ ဆုဖလားအောငျမွငျမှုဆိုတာက အဲဒီကစားသမားတဈဦးရဲ့ သမိုငျးမှတျတိုငျပဲဖွဈပါတယျ။ ဘောလုံးသမိုငျးတဈလြှောကျကို ပွနျကွညျ့ရငျ အဓိက ဆုဖလားတှေ တျောတျောမြားမြား ရယူခဲ့ကွတဲ့ ကစားသမားတှေ အမြားကွီးပါပဲ။ ဒါပမေဲ့ Nothing is Perfect ဆိုတဲ့ စကားအတိုငျး ကှကျလပျလေးတှတေော့ ရှိကွပါတယျ။ ဥပမာ လကျရှိကမ်ဘာ့အကောငျးဆုံး ဘောလုံးသမားစာရငျးဝငျ စီရျောနယျလျဒို Cristiano Ronaldo ၊ မကျဆီ Messi တို့ဆိုရငျ ကလပျအသငျးနဲ့အတူ သူတို့မရဖူးတဲ့ အဓိက ဆုဖလားဆိုတာ မရှိသလောကျပါပဲ။ ဒါပမေဲ့ နှဈယောကျစလုံးက ကမ်ဘာ့ဖလားကိုတော့ မကိုငျမွှောကျနိုငျသေးပါဘူး။ အခုဖျောပွမှာက အဓိက ဆုဖလားအားလုံးနီးပါး ရခဲ့ဖူးတဲ့ နာမညျကြျောကစားသမားတှေ အကွောငျးဖွဈပွီး တခြို့ကစားသမားတှဆေိုရငျ ကမ်ဘာ့ဖလား၊ ခနျြပီယံလိဂျစတဲ့ အောငျမွငျမှုတှေ ရယူခဲ့ပမေယျ့ မရဖူးသေးတဲ့ ဆုဖလားတှေ ရှိနဆေဲပါ။ သူတို့တှကေ ဘယျသူတှလေဲဆိုတာ ကွညျ့လိုကျရအောငျ . .
ဘောလုံးလောကမှာ ကြျောကွားသငျ့သလောကျ မကြျောကွားတဲ့ Underrated Players တှထေဲမှာ မာတာ Juan Mata ဟာ တဈဦးပါအဝငျပါ။ ထိပျတနျးအဆငျ့ရှိ ကှငျးလယျတိုကျစဈကစားသမား ဖွဈသလို၊ သူရခဲ့တဲ့ ဆုဖလားမှတျတမျးတှအေရ မာတာရဲ့ အနအေထားက တဈဦးခငျြးအကောငျးဆုံး ဆုတံဆိပျတဈခုခု ရသငျ့နသေူဖွဈပါတယျ။ ကမ်ဘာ့ဖလား၊ ခနျြပီယံလိဂျ၊ ယူရိုပါလိဂျ၊ FA ဖလား၊ ယူရို၊ လိဂျဖလား အစရှိတဲ့ ဆုဖလားတှေ အမြားကွီး ဆှတျခူးခဲ့ပွီး သူ မရဖူးသေးတာဆိုလို့ ဥရောပစူပါဖလားနဲ့ အမှတျပေးဖလားသာ ကနျြပါတော့တယျ။ ဒါ့အပွငျ မာတာဟာ အဓိက ဆုဖလားအားလုံးနီးပါးရခဲ့ဖူးတဲ့ ရှားရှားပါးပါး စပိနျကစားသမားတှထေဲမှာ တဈဦးအပါအဝငျဖွဈပါတယျ။
မျောဒနျဘောလုံးလောကမှာ ဆှီဒငျဝါရငျ့တိုကျစဈမှူးကွီး အီဘရာဟီမိုဗဈ Zlatan Ibrahimovic ဆိုတာက ထိပျတနျးစာရငျးဝငျ တိုကျစဈမှူးတဈဦးဆိုတာ ဘယျသူမှ မငွငျးနိုငျပါဘူး။ သိပျမကွာသေးခငျကမှ ပရျောဖကျရှငျနယျကစားသမားဘ၀ သှငျးဂိုး(၅၀၀)ပွညျ့ခဲ့ပွီး အသကျနဲ့မလိုကျတဲ့ ခွစှေမျးမြိုး ပွသနသေူလညျးဖွဈပါတယျ။ မတူညီနိုငျတဲ့ နိုငျငံ(၅)ခုမှာ အဓိက ဆုဖလားပေါငျး(၃၃)ခု ရယူနိုငျခဲ့တဲ့မှတျတမျးကောငျးကို ပိုငျဆိုငျထားပမေယျ့ အီဘရာဟီမိုဗဈအတှကျ ကှကျလပျဖွဈနတောက ခနျြပီယံလိဂျဖလားနဲ့ ရီးမီးယားလိဂျဖလားပါ။ လာလီဂါ၊ စီးရီးအေ၊ ပွငျသဈလီဂူး၊ ယူရိုပါလိဂျအစရှိတဲ့ ဆုဖလားတှေ ရယူခဲ့သူ အီဘရာဟီမိုဗဈအတှကျ ဒီကှကျလပျ(၂)ခုကို ဖွညျ့နိုငျဖို့က မလှယျလောကျတော့ပါဘူး။
ဘာစီလိုနာ၊ PSG နာမညျကြျော နောကျခံကစားသမားဟောငျး မကျဇျဝဲလျ Maxwell ကတော့ ဘောလုံးလောကမှာ မရှိတော့ပမေယျ့ သူရရှိခဲ့တဲ့ ဆုဖလားမှတျတမျးတှကေ မယုံနိုငျလောကျအောငျပါပဲ။ ကစားသမားဘဝတဈလြှောကျ ဥရောပမွမှော ဆုဖလားပေါငျး (၃၆)ခုအထိ ဆှတျခူးခဲ့ပွီး သူကစားခဲ့တဲ့ကလပျအသငျးတိုငျးနဲ့ အဓိက ဆုဖလားတှေ ရယူနိုငျခဲ့သူဖွဈပါတယျ။ ဘောလုံးလောကမှာ ကငျြလညျခဲ့စဉျက မကျဇျဝဲလျဟာ ဆုတံဆိပျအမြားဆုံးရရှိခဲ့သူ (ကလပျအသငျးနဲ့ ဖလား ၃၃ခု၊ တဈဦးခငျြးဆု ၅ခု)အဖွဈ မှတျတမျးစိုကျထူခဲ့သူလညျးဖွဈပါတယျ။
မကျဇျဝဲလျကို ကြျောဖွတျပွီး လကျရှိဘောလုံးလောကမှာ အဓိကဖလားနဲ့ ဆုတံဆိပျ အမြားဆုံးရရှိခဲ့သူအဖွဈ ရပျတညျနသေူက ဒနျနီအဲလျဗတျဈ Dani Alves ဖွဈပါတယျ။ ကစားသမားဘဝတဈလြှောကျ ဆုဖလားပေါငျး (၄၃)ခုအထိ ရယူခဲ့ပွီး သူကလညျး မကျဇျဝဲလျလိုပဲ ကစားတဲ့အသငျးတိုငျးနဲ့ ဆုဖလား ရယူနိုငျခဲ့သူပါ။ ကမ်ဘာ့ဖလားကိုသာ ဆှတျခူးခဲ့ရငျတော့ ဒနျနီအဲလျဗတျဈရဲ့ ကစားသမားဘဝက ပွညျ့စုံသှားပွီလို့ ဆိုရမယျ . .